WAA MAXAY SOO SAARAHA MALAB: NOOCYADA IYO SHURUUDAHA LAGU XULANAYO FARSAMO - BEEKEEPING
Medogonka - qalab muhiima oo ku yaala apiary. Mashruucani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka hesho malab cusub malab.
Maqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay sida medogonki yihiin, sida loo isticmaalo iyo sida loo doorto in aan lagu qaldamin.
Isticmaalka wax soo saaraha malab ee kaydsiga dhirta
Soo saaraha Honey waa lagama maarmaan for beekeeper kasta, sababta oo ah malab soo ururiyey by bees waa in laga helaa malab ah xiran.
Qalabku waa a centrifuge, kaas oo ka kooban taanbo go'an, kaas oo gudaha ku soo noqda. Daboolka waxaa ku yaala cajalado kala duwan oo loo guuri karo, halkaas oo qaboojiyaha leh malab ah. Dukaamadaasi waxay ku wareegsan yihiin wareeggooda 180 °.
Honeycombs waxaa laga soo qaaday rugta, la furay qalab gaar ah (mindi ama fargeeto) oo lagu rido drumka. Dabadeedna waxay ku xiran tahay gacanta, malabkuna hoos ayuu u dhacaa.
Waa muhiim! Xawaaraha wareegga ee cajaladaha wuxuu noqon karaa ilaa 80 daqiiqo daqiiqaddiiba.
Next, malab soo ururiyey iyada oo loo marayo dalool gaar ah, beekeeper u diyaarsado weelasha loo diyaariyey kaydinta.
Mid ka mid ah mabaadi'da aasaasiga ah ee qalabka noocan ah waa ilaalinta unugta. Kadib markaad bamgareyso waxaa mar kale la isticmaali karaa.
Noocyada qaababka meesha ay ku yaalaan cajalado
Qeybinta qalabka waxaa lagu sameeyaa iyadoo loo eegayo meesha ay ku yaalaan cajaladaha halka unugyada lagu rakibay. Dhamaan nuucyada kala duwan iyo noocyada caanka ah ee wax soo saaraha malab.
Qalabkaas oo kale, cajalado ayaa ku yaala weelka roogga.
Isticmaalka hababka noocan ah waa sida soo socota:
Marka hore, unugyada ayaa la rakibay si ay geedaha ku dul yaallaan daboolka sare ee cajalka.
Kadib markii la dhejiyay qaabka ugu dambeeyay, taangiga waxaa lagu xiray dabool leh waxayna bilaabeen in ay lafdhabaraan.
Xawaaraha wareegga ayaa si tartiib ah u kordhaya. Mudada wareegga joogtada ah waa 15 daqiiqo.
Taas ka dib, malabkii aadka u ba'ay ayaa ka yimaada durbaanka.
Faa'iidada meeshan waa:
ilaalinta sharafta iyo dhismaha unugyada;
bamgareynta malab badan oo ka mid ah muraayadaha hal mar;
Khatarta ugu yar ee jabinta malabkii.
Waa muhiim! Ha isticmaalin muraayadaha cusub ee gacanta oo leh xayawaan milix ah. Qaab dhismeedka hore si fiican u xirto silig.
Qalabka noocan oo kale ah, ubaxyo malab ah ayaa lagu rakibay iyadoo la raacayo jaantusyada wareegga dareenka. Sidaa darteed, tirada cajaladaha ku jira qalabkan waa mid xadidan.
Kansaraha malabaha xayawaanka ayaa sidoo kale loo kala qaybiyaa iyada oo ku xiran habka wareegga qasnadaha:
Aan hadda lahayn - qalabka noocan oo kale ah, bamgareynta waxaa lagu sameeyaa oo keliya ka baxsan unugyada. Ka dib markaa, nuxurku waa la helayaa, u jeestay dhinaca kale, habkana waa soo noqnoqonayaa.
Gacan-siinta gacanta - qiyaasta wareegga wareegga qalabka waxaa lagu rakibay hinges, kaas oo saaro cajalka. Oo hadda waxaa loo rogi karaa si xor ah marka hore, ka dibna dhinaca kale.
Dib looma hadli karo - Mabda'a ayaa la mid ah marka la wareegayo gacanta, laakiin wareegga si toos ah ayaa loo fuliyaa.
Beetroot, vatochnik, phacelia, linden, sunflower, xayawaanka, lobelia, acacia, slyzun qaanso, cows, irga, koriye, blueberry, sage, canola, dahabka, lungwort, barafka, lychee, echinacea, mallow, heather, barberry alfalfa
khatarta waxyeellada unugyada by xoog xoogga;
khatarta dhaawaca sababtoo ah bamgareynta buuxda. Si looga hortago tani, bamgar aan dhammaystirnayn malab waa la fuliyaa, marka hore dhinac dhinac, ka dibna dhinaca kale. Oo kaliya ka dib markii dhan malab ah oo dhan waa la daalaa;
tiro xaddidan oo cajalado ah - ugu badnaan 4;
marmar bamgareynta hal dhinac - 2-4 daqiiqo.
Nidaamyada radiyaha waxay leeyihiin faa'iidooyin badan, waxay ku haboon yihiin, ku haboon yihiin kuwa waaweyn iyo beeraha warshadaha. Kaliya diidmada waa qiimaha. Way ka qaalisan yihiin qiyaastii.
Chordialnye waa fududahay in lagu hayo, jaban, ku habboon milkiilayaasha tiro yar oo finan ah. Laakinse waa la aqbali karaa, sababtoo ah cilladahooda.
Qodobbada labaad ee ay soo saartey malabku waa kala-duwanaanshaha: buug ama koronto.
Honey ma aha waxtarka kaliya ee waxtar leh ee bees, propolis, jelly boqorno, perga, manka, shinni shinni, wax, iyo xitaa aboor ku beerta ayaa si ballaaran loo isticmaalo daawada dhaqameed.
Gacanta ayaa la qabtay
Qalabka noocan oo kale ah waxaa lagu xakameynayaa gacanta: nooca ugu caansan ee soo saaraha malab.
suurtagal in la isticmaalo xaalad kasta.
Way adagtahay in la xakameeyo xawaaraha wareegga - sababtoo ah waxaa jira halis ah dhaawaca unugyada.
Guudmarka durbaanka waxaa lagu sameeyaa makiinada korantada. Awoodda ayaa laga helaa laga bilaabo caanaha ama beteriyada, taas oo u ogolaanaysa habka loo isticmaalo berrinka.
Ma taqaanaa? Waxaa sidoo kale jira waxyaallaha malabyada tamarta qoraxda. Qalabka noocan oo kale ah ayaa lagu rakibayaa qalabka tamarta qoraxda (batari qoraxda iyo isku-ururiyaha). Waxay si gaar ah uga faa'iideysan doonaan reer miyiga ah. Faa'iidada qalabkan waa mid madaxbannaan iyo xawaar sare ee wax soo saarka. Haa - kharash badan.
Soo saaraha malabaha korontada ayaa ku haboon aduunka weyn ee tufaaxa ah ee la soo saaro.
xakameynaya xawaaraha iyo laf-dhabarka wareegga;
xakamaynta waqtiga bamgareynta;
isbedel dhakhso ah jihada dhaqdhaqaaqa kartridda;
badeecadda badeecadda xawaaraha sare.
ku tiirsanaanta ilaha tamarta;
Qalabka yar yar ee wareegyada (laga bilaabo 2 ilaa 6) - fursadda fasaxa ugu fudud ee loogu talagalay kuwa leh hibada yaryar ee hiwaayadda. Sida caadiga ah qalabka noocan oo kale ah.
Tirooyin badan oo muraayadaha ah (8-16) - soo saaraha malabku waxay ku haboon yihiin dadka waaweyn.
Xirfadlayaasha (20 ama kabadan) - kuwan waxaa isticmaali doona shirkado waaweyn oo soo saara malab.
Waa faa'iido u leh beeyaal bilowga ah si ay u bartaan sida loo sameeyo rugta, iyo sidoo kale ku saabsan sifooyinka wax lagu cuno.
Medogonki waxay ku kala duwan yihiin qaabka qaabka, iyo nooca wadista. Sida loo doorto qalabka saxda ah ee beertaada?
Waxa la rabo
Doorashada qalab loogu talagalay bamgaraynta waa in la sameeyaa iyadoo lagu saleynayo tirada alaabta ee aad qorsheyneyso inaad hesho. Dadka haysta tiro yar oo ah gumeysi shinni ah (ilaa 10), laba xabbadood oo miisaan leh oo leh qalabka gacanta ku habboon ayaa ku habboon.
Kuwa leh 30 ama ka badan finan, waxaad tixgelin kartaa afar-jir. Waa hagaag, haddii aad qorsheyneyso inaad soo saarto dhowr tan oo badeecado ah, oo aad leedahay wax ka badan 50 xabo, waxaad u baahan tahay furaha malab yar, oo doorbidaya koronto koronto.
Qodobbada kale ee muhiimka ah waa maaddada qaabka. Kuwa ugu caansan waa aluminium, galvanized galvanized, iyo birta aan saliida lahayn.
Birta aan dharka lahayn waa mid aad looga doorbido. Kansaraha malabku wuxuu noqon doonaa mid qaali ah, laakiin ammaan. Tani waxay muhiim u tahay kuwa qorsheynaya in ay ku iibiyaan alaabadooda tiro badan.
Ma taqaanaa? Sharciga Midowga Yurub wuxuu mamnuucayaa isticmaalka wax soo saaraha malabyada laga sameeyay maadooyinka aan haysan oggolaansho cunto. Sidaa darteed, haddii aad qorsheyneyso in aad soo saaro sheyga dibadda, qaado taxadar si aad u iibsato qalab laga sameeyey birta aan lahayn.
Waxaa sidoo kale jira kaabayaasha malab laga sameeyey qalabka kale - aluminium ama birta galvanized. Waxaa loo isticmaali karaa guriga.
Suuqu waxay iibisaa tiro badan oo qalab ah baahida macaamiisha. Qof kastaa wuxuu awoodi doonaa inuu doorto habka ay u shaqeynayaan - laga bilaabo ugu yar ilaa kan ugu weyn.